Maxkamada sare ee Kenya oo hakisay qorshe ay dowladda ku dooneysay in ay ku rarto qoxootiga Soomaalida - Caasimada Online
Home Warar Maxkamada sare ee Kenya oo hakisay qorshe ay dowladda ku dooneysay in...
Maxkamada sare ee Kenya oo hakisay qorshe ay dowladda ku dooneysay in ay ku rarto qoxootiga Soomaalida
Nairobi (Caasimada Online) Maxkamadda Sare ee dalka Kenya ayaa maanta oo Arbaca ah waxa ay dib u dhigtay qorshe dowaldda Kenya ay ku dooneysay in ay qoxootiga Soomaalida uga rarto magaalooyinka iyagoona dib ugu celinaya xeryaha qoxootiga.
Maxkamadda ayaa dhageestay dacwado ay keeneen hey’addo dhowr ah oo qaabilsan xuquuqda qoxotiga isla markaana u doodad, kuwaasoo maalmahan is hayay dowladda Kenya.
Ururka ay ku bahoobeen hey’addahan oo loo soo gaabiyo Urur ay ku bahoobeen URPL ayaa sheegya in wax qaldan ay tahay go’aanka dowladda Kenya ay ku dooneyso in magaalooyinka uga saarto qoxootiga Soomaalida ee ku nool magaalooyinka.
Maxkamadda ayaa sheegtay in ay dib u qiimeen doonto go’aanka dowladda ay gaartay in uu yahay mid waafaqsan sharciga iyo in kale.
Maxkamadda ayaa sheegtay in labo toddobaad kaddib dib la furi doono dacwada ku saabsan in dib loo celiyo qoxootiga Soomaalida ee ku dhaqan magaalooyinka.
Hey’addaha u doodda qoxootiga ayaa sheegay in dadka la celinaayo aan loo heynin meel ay tagaan waayo xeryaha waa kuwa buux dhaafay oo go’doonsan.
Hey’adda qoxootiga u qaabilsan QM UNHCR ayaa sheegtay in xeryaha loo raraayo qoxootiga Soomaalida in ay yihiin kuwa go’doon ah.
Tusaale ahaan xerada Dhadhaab oo an tan ugu wayn waxa ay hooy u tahay nus milyuun qof , waxana markii hore loogu talagalay illaa 90,000 oo qof.
Kenya ayaa toddobaadkan la sheegay in ay billaabeyso raaf kii ugu ballaarnaa oo ka dhan Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka.
Kenya ayaa arrintaas u yeeleysa si loo adkeeyo ammaanka dalkeeda, maadama ay soo dhowdahay doorashada guud ee dalka.